Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mazava ny lalany | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mazava ny lalany
Afaka arahabaina Andry Rajoelina. Tanteraka izay ny dingana voalohany eo ny fikasany hitondra ny fanjakana tsy sembasemban’ny sakantsakana. Rehefa lany Filohan’ny Repoblika ny tenany dia mbola nohamafisin’ny vahoaka indray izany toky nomeny azy izany ka solombavam-bahoaka mpanohana ny politika napetrany no maro an’isa ao amin’ny Antenimierampirenena araky ny vokatra tamin’ny fifidianana teo. Mazava izany fa tsy manam-petra afa-tsy ny lalàna ny làlana omban’ny fanatanterahana. Tsy mila fifanamboarana amin’ny itsy na amin’ny iry. Na izany aza tsy midika izany fa afaka manao an’izay danin’ny kibo fa toy izay voalaza etsy aloha eo ihany ny fetran’ny lalàna izay mijoro, fefy miaraka amin’ny rariny.
Ny adidin’ny Antenimiera roa tonta moa dia ny fandinihana sy ny fandaniana ny lalàna ho raisina sy ny fanaraha-maso ny fomba nampiasain’ny fitantanana ny vola sy fitaovana fiandrianana. Noho ny fijoron’ny vondrona maro an’isa mihoatran’ny atsasa-manila dia misosa tsy misy sakantsakana izany eo amin’ny andavanandro, nefa kosa misy ihany ny raharaha lehibe izay azo lazaina ho kihon-dàlana ka nofehezina amin’ny fitakina fahamalinana bebe kokoa. Misy fanapahan-kevitra ilàna fahamatorana avy amin’ny fahamaroana an’isa mihoatra ny atsasa-manila.
Rehefa miseho izay tarehin-draharaha izay, toy izay no ahatazanana ny toe-tsain’ny mpanohitra, ny vitsy an’isa indray no tompon’ny fandidiana. Na hanatevin-dàlana ny maro an’isa na hiziriziry ao amin’ny fanoherana. Eo tsy manan-toerana ao anatin’ny fandinihana intsony izany antok’aina ho an’ny antoko izany, ny tombotsoam-pirenena irery ihany no hany manan-danja. Ady hevitra sy fifandresen-dahatra ifanaovan’ny maro an’isa sy ny mpanohitra no hatrehina amin’izany.
Eo ilay fandrika amin’ny fitrangan’ny fakam-panahy mitarika any amin’ny fironana handao ny fifandresen-dahatra ka handroso any amin’ny fanaovana ady varotra. Fizorana amin’ity làla-malama ity dia ny dingana voalohany ihany no manahirana, ny manaraka dia fahazarana tsy hay hiverenena : veloma any fa lany hasina ! Sanatria anefa ny fiverenan’ny tantara toy ny fisehon’izany tsena izany izay sehatra filalaovan’ny depiote teo aloha. Tsy tokony ho afa-maina anefa ny mpividy, raha misy tsenam-barotra fividianana entana maloto mazava ho azy fa maloto saina koa ny mpividy.
Asa izay fahamarinan’ny filazana momba ny fanarakarahana depiote 73 voampanga nanakalo ny vatony fandaniana lalàna tamin’ny sandana 50 tapitrisa ariary. Tsy resahana firy ireo mpividy sy ny momba ny loharano nihavin’ny volabe natobatobaka teo amin’izany varomaizina izany.